Jabuuti oo ka jawaabtay eedeynta maamulka Farmaajo | KEYDMEDIA ENGLISH
JABUUTI - Wasiirka Maaliyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale ayaa ka jawaabey eedeynta maamulka Farmaajo ee ah in dowladda Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya, sdioo kalena la safatay cadowgeeda Kenya.
Wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay ku celceliso eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn oo u jeedinayso Jabuuti, oo ah dal walaalo ah islamarkaana qeyb wayn ku leh soo celinta dowladnimada Soomaaliya.
"Aad ayaan uga xumahay inaan ka maqlo wasiir sare oo katirsan dowladda Soomaaliya oo ku celcelinaya mar labaad eedeymo been abuur ah oo ah in Jabuuti ajande gaar ah ka leedahay xiisadaha siyaasadeed ee hadda ka jirtaa Soomaaliya," ayuu yiri Wasiir Dawaale.
Wasiirka ayaa sheegay in eedeymaha uga imaanaya maamulka Farmaajo uu wiiqayo qiyamkka asaasiga ah ee Jabuuti oo mudo dheer ka shaqeynaysay nabada iyo xasiloonida Soomaaliya.
"Waxaan si weyn u qiimeynaynaa waxay noo qabatay Soomaaliya.Sidaas darteed, ma sameyn karno wax kayar abaalkii noo gashay. Tani waa sababta ay wiilasheennu ugu dhimanayaan dib u soo celinta xasiloonida Soomaaliya," ayuu hadalkiisa raaciyay Wasiirka.
Beenintan ayaa timid kadib markii shalay Wasiir Dubbe uga digay Jabuuti iyo Kenya inay faragelin ku sameeyaan qoraalka Midowga Africa ee ku saabsan xaaladda Soomaaliya.
Xiriirka Jabuuti iyo dowladda Farmaajo ayaa xumaaday tan iyo markii gudiga xaqiiqo raadinta ee ka socday IGAD ay tageen xadka Kenya iyo Soomaaliya oo ay sheegeen inaysan jirin eedeynta Villa Somalia ee ahayd in Kenya ay Mandheera ku hubeynayso Malleeshiyaadka C/rashiid Janan, oo hadda isku dhiibay DF.